Ilhaan Cumar iyo Xildhibaano Yuhuud Ah oo Ka Tirsan Congreska oo Foodda Is Daray | Gabiley News Online
Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka Congreska Mareykanka, ayaa waxay jawaab kulul ka bixisay hadal ka soo yeedhay xubno ay ka wada tirsan yihiin xisbiga Dimuqraadiga oo Mareykanka iyo Israa’iil la barbar dhigay kooxaha Taliban iyo Xamas.
Tiro xildhibaano Yuhuud ah, ayaa Ilhan Cumar ugu baaqay inay “cadeyso ereyadeeda”, laakiin Ilhaan oo ah wakiilka Minnesota ayaa si kulul u wareertay xildhibaanadan.
Ma aha markii ugu horeysay oo ay dhalleeceyn Ms Omar u jeediso Israel ay khilaaf ka dhex abuurto xubnaha xisbigeeda.
Khilaafka, ayaa imanaya todobaadyo uun kadib markii dagaalkii u dhaxeeyay Xamas iyo Israa’iil lagu soo afjaray xabad joojin iyadoo ay isa soo tarayaan wararka ku saabsan weerarada neceyb ee ka dhanka ah Yuhuuda Mareykanka.
Balse hadalkii xildhibaan ilhaan Cumar oo ka hadashay kooxaha Islaamiyiinta xagjirka ah ee Xamaas iyo Taalibaan ayna la barar dhigtay oo ay hal jumlo ay kula xusto Mareykanak iyo Israa’iil ayaa waxay khilaaf ka dhex dhalisay xubnaha xisbigeeda.
“in ay la barbardhigto Mareykanka iyo Israel Xamaas iyo Taalibaan waa hadal gef ah oo aan loo meel dayin” ayaa lagu yidhi qoraal ay soo saareen xubno uu hogaaminayo Jerry Nadler oo ka tirsan Dimuquraadiga lagana soo doorto New York.
“in la iska indhatiro farqiga u dhexeeya dimuqraadiyada ku dhisan sharciga iyo ururada aan sumacdda lahayn kuna lug leh falal argagixisanimada uma wanaagsan sumcadda qofka u doodaya waaan mid muujinaysa dhexdhexaadnimo la’aan qota dheer” ayay intaa ku dareen xubnahani.
Horraantii Khamiista, Ms Omar – oo asalkeedu soomaali yahay islsmarkana qaxootinimo hore ugu soo gashay Mareykanka kana mid ah Muslimiintii ugu horeeyay ee loo doorto Koongaraska, ayaa jawaab kulul siisay xubnahani oo ay ku tilmaamtay “kuwa aan xishoon” iyada oo ku eedeysay inay ku kaceen”falal Islaam naceyb ah”.
Furitaanka Ururada: Ma Run Baa Ma Riyaa? Siyaasi Cali Guray.
Diyaaradaha Dagaalka Israel oo Duqeeyay Marinka Gaza